Finoana Katolika: Inona ny Konfesy?
dimanche, 17 mars 2019 11:44
Amin'ny finoana Katolika, dia anisan'ireo Sakramenta 7 ny Fampihavanana izay singa iray ao anatiny ny Konfesy (Confession)
Ireo Sakramenta Fito:
- Ny Batemy (Baptême)
- Ny Eokaristia (Eucharistie)
- Ny Fankaherezana (Confirmation)
- Ny Fampihavanana (Sacrement de réconciliation, appelé aussi sacrement de pénitence)
- Ny Fanosorana ny marary (Onction des malades, appelée aussi sacrement des malades, anciennement extrême-onction)
- Ny Fanambadiana Kristianina (Mariage)
- Ny Filaharana (Ordination, fanamasinana Pretra sy Relijiozy)
Ny Sakramentan'ny Fampihavanana izany, dia fandinihan-tena aloha, sy ny zavatra tsy nety rehetra natao, examen de conscience. Fieken-tena fa diso na teo anatrehan'ny tena, na teo amin'ny olon-kafa na teo amin'ny fiarahamonina.
Fotoana iray io izany tsy andaingana amin'ny tena, fa hiatrehana ny eritreritra, tsy fitadiavana fanamarinan-tena, fa fiekena tokoa ny tsy nety vita, na araky ny lalan'ny Fiangonana na araky ny lalàn'ny fiaraha-monina.
Vita izay fandinihan-tena izay dia miaiky heloka eo anatrehan'ny Pretra, izay solotenan'i Kristy, voahasina amin'izany.
I Kristy dia nanome fahefana ny Fiangonana tamin'ny alalan'ny Masindahy Piera, "Izay heloka avelanareo dia voavela, ary izay tananareo kosa dia voatana" (Matio 16,19).
Nomen'i Kristy ihany koa, taorian'ny Fitsanganana ho velona, tamin'ny fisehoany tamin'ireo Mpianany, ny Fanahy Masina ho famelana ny fahotana, ka hihavanana indray amin'Andriamanitra, satria isaky ny ota vita dia isika no manimba izany fihavanana izany, na fihavanana amin'ny tena ihany, na amin'ny hafa, na amin'Andriamanitra (Joany 20, 22-23).
Nahoana no mila mikonfesy amin'ny Mopera, nefa izy koa mpanota, tsy aleo ve miresaka sy miaiky ny fahotana mivantana amin'Andriamanitra?
Azo atao ary ampirisihina hatrany isika hivavaka isan'andro, na fotoana fohy monja azy, ary hifona tamin'ny tsy nety natao sy hisaotra ny tsara vita.
Ny Fiangonana anefa dia ilaina, satria isika ao anatin'ny fiarahamonina, afaka mivavaka irery sy mifona irery, fa tsy ampy izay.
Amin'ny Katolika dia manana ny fahefany manokana nampitain'i Kristy tamin'i Masindahy Piera, Filohan'ny Fiangonana, ny fahefany, izay niampita hatrany tamin'ny alalan'ireny fanamasinana Pretra ireny (Sakramentan'ny Filaharana na ny Onction Ordre).
Ary sao tantarain'ilay Pretra amin'olon-kafa ny fahotako?
Fotoana iray hifampiresahanao amin'ny olon-kafa tena atokisanao io, tsy voatery hitanisa litania mahazatra ianao eo, misy aza ny mbola mandainga indray eo, nefa hi konfesy no anton-dia, ka dia ny ota andavan'andro foana ny an'ny sasany no tantaraina eo fa afenina ilay ota manenjika ny eritreritra.
Fa ny Pretra eo dia fotoana hifanakalozana olana sy ankana hevitra, filazana ny tsy mety natao, dia manoro hevitra eo ny Pretra, efa voahofana amin'izany izy, ary nanao Voady hitazona ny tsiambaran-telo mandra-maty, na ny Eveka, na ny Papa lehibehiny aza tsy afaka manontany azy. Tsy service de renseignement na mpitsikilon'ny Fiangonana izany ny Pretra.
Noho ny fahefana nomena azy, dia afaka mamela ny helokao izy.
Afaka avelan'ny Pretra avokoa ve ny heloka rehetra? Ary ahoana ny Fitsarana manoloana izany?
Misy heloka, izay ny Père Curé ihany no maha afaka azy, izany hoe na ny Pretra mpanampy, na ny Père Vicaire, aza tsy maha afaka azy, ary misy dia ny Eveka na ny Papa mihitsy no afaka mamela izany heloka izany.
Ohatra ny famonoana olona, ny fanalan-jaza.
Mila manantona ny Pretra, dia izy no hilaza ny tokony atao rehetra.
Mpitsikombakomba amin'ny olon-dratsy ve ny Pretra na ny Eveka satria mahafantatra ny heloka be vava vita nefa tsy nilaza tamin'ireo manampahefana na ny fitsarana?
Amin'ny Lalàna Katolika, dia tsy azony atao velively ny mamosaka ny tsiambaratelo mandritra ny Konfesy.
Misy ireo heloka dia ny Pretra, na ny Eveka no manoro ny lalana tokony alehanao hisian'ny fampihavanana sy ny famelan-keloka marina.
Ohatra hitatsika amin'izany ilay Kardinaly Frantsay, voaheloky ny Fitsarana frantsay 6 volana sazy miantona, satria nahafantatra nefa tsy nilaza ny fisian'ny Pretra nametaveta zaza nandritra ny taona maro, izay nametram-pialana moa io Kardinaly io izao, fa hatramin'ny farany, dia tsy namosaka ny tsiambaratelo fantany izy.
Fotoanan'ny Karemy izao, 40 andro alohan'ny Paka, fotoana fibebahana, fampihavanana amin'ny hafa, ary fanonerana ny tsy nety natao.
Toy ny hoe amnistie izany izy io, fa ny amboniny, dia miaiky amin'ny tena sy ny fiarahamonina ary ny Fiangonana, amin'ny alalan'ny fihatrehanao ny Pretra ianao, ny tsy nety nataonao, ary manonitra ny fahadisoana vita.
"Alohan'ny anoloranao Sorona amin'Andriamanitra, ka raha misy rahalahinao miady aminao, dia ajanony aloha izany vavaka sy fanolorana Sorona Masina ataonao izany fa mandehana aloha mihavana amin'ny rahalahinao".
Ny dikan'izany dia hoe aza lany andro mivavaka irery mangina ao, nefa ny fiarahamonina misy anao aza tsy milamina aminao, rehefa vita izay fampihavanana izay dia miverena eo anatrehan'Andriamanitra ianao.
Andriamanitra be fitiavana ary mamela heloka hatrany, ka tsy maninona ve raha manota, fa iny ve tsy ho avelan'ny Pretra ihany, mitady Pretra hafa fotsiny?
Izay no ilana ny fandinihan-tena ataonao, ny mandainga amin'ny tenanao no fahotana anisan'ny lehibe indrindra. Ary ny fahotana niniana natao, na farany bitika indrindra aza, dia lehibe lavitra noho ny fahotana lehibe natao tsy nahy.
Inona no atao rehefa hikofesy?
Arakaraky ny vanim-potoana, misy toerana efitra fanaovana izany any am-piangonana, izay tsy mifankahita ny Pretra sy ilay olona hikonfesy, misy kosa dia fotoana hifanakalozana ary fasahiana hiatrika ny fiarahamonina sy ny Fiangonana ka dia mihatrika ny Pretra mifankahita maso.
Raha ny Pretra aza tsy sahinao akory ny hiatrika sy angataka famelana aminy, ka ataonao ahoana ny hiatrika an'Andriamanitra, na ny olona sy ny fiarahamonina nanaovanao adisoana?
Misy ireo famelan-keloka faobe omen'i Papa izay misy Eveka na Pretra manokana omeny fahefana amin'izany.
Ny Pretra eo dia manao Etole voloparasy, lokon'ny fibebahana (Na ilay lamba afehiny ny tendany midina amin'ny sorony ka hatrany amin'ny tongony iny).
Raha misy olona miala aina, mitady Pretra te hikofesy sy mila fibebahana alohan'ny ahafatesany?
Raha afaka miantso Pretra dia tena tsara, fa rehefa tsy misy, dia ny Katolika vita Confirmation, dia afaka manao izany ankamehana, afaka mampanao Batemy ankamehana raha tsy vita Batemy ilay olona, afaka mampikofesy azy, mandray ny heloka rehetra vitany, fa mivoady tsy amosaka izany mandra-maty amin'ny hafa, nefa kosa mila manantona Pretra aorian'izany, dia ny Pretra no mahafantatra ny tokony ataonao.
Entinao am-bavaka ilay olona niala aina nampikofesenao, tsofinao rano izy, ahita ny Tavan'Andriamanitra. Manana fahefana amin'izany ianao satria efa voahosotra tamin'ny Batemy noraisinao.
Raha tsy vita Confirmation na Mariazy ianao, nefa ianao irery no miatrika ilay miala aina, dia mivavaha, ary raiso ny fifonany rehetra, dia manantona Pretra avy eo, satria havesatra aminao iny.
Bon carême et bon dimanche à tous, ce dimanche de St Patrick.